အမြဲတမ်း ကို ဆက်ဆီ ကျတဲ့ ပုံတွေ နဲ့ ရင်ဖို အောင် လုပ်လေ့ ရှိတဲ့ Xmue Xmue ရဲ့ ပုံရိပ်များ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အမြဲတမ်း ကို ဆက်ဆီ ကျတဲ့ ပုံတွေ နဲ့ ရင်ဖို အောင် လုပ်လေ့ ရှိတဲ့ Xmue Xmue ရဲ့ ပုံရိပ်များ
အမြဲတမ်း ကို ဆက်ဆီ ကျတဲ့ ပုံတွေ နဲ့ ရင်ဖို အောင် လုပ်လေ့ ရှိတဲ့ Xmue Xmue ရဲ့ ပုံရိပ်များ
photo model အမှူး က တော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေ တဲ့ photo model တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိပြီး ချစ်စရောကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.
ယခုအခါမှာ လည်း ပိုက်ဆံရှိဖို့မ လိုဘူးမောင်လေးရှိရင်….အမှိုက်ကောက်ရလဲ ဖစ်တယ် နော် ဆိုပြီး ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုရော မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြလေ့ရှိပါတယ်။
သူမကတော့ ယခုမှာ အသည်းယားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေတဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး နဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို လှုပ်ခပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် မော်ဒယ်အမှူးရဲ့ ကြွေလောက်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
photo model အမႉး က ေတာ့ လက္ရွိမွာ ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိေန တဲ့ photo model တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္ကို တင္ေပးေလ့ရွိတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးေတြ အလန္းစား ဖက္ရွင္ေလးေတြ ကို ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိၿပီး ခ်စ္စေရာကာင္းလြန္း တဲ့ အၿပဳံးေလးေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူမကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ photo model တစ္ေယာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။.
ယခုအခါမွာ လည္း ပိုက္ဆံရွိဖို႔မ လိုဘူးေမာင္ေလးရွိရင္….အမႈိက္ေကာက္ရလဲ ဖစ္တယ္ ေနာ္ ဆိုၿပီး ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝထားတာျဖစ္ပါတယ္ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈေရာ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုပါ အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူမကေတာ့ အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ကို ခ်ျပေလ့ရွိပါတယ္။
သူမကေတာ့ ယခုမွာ အသည္းယားေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလြန္းေနတဲ့ အလန္းစား ဗီဒီယိုေလး နဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ရင္ကို လႈပ္ခပ္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ ဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းေနခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြဟာ ပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ေတြ ပိုေစခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ေမာ္ဒယ္အမႉးရဲ႕ ေႂကြေလာက္စရာ ေကာင္းလြန္းတဲ့ ပုံစံေလးနဲ႔ လွပေနတဲ့ အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ၿပီး အဆိုပါပုံရိပ္ေလးေတြကို ေအာက္မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
Previous post ငွေမပြတ်စေ တဲ့ ယတြာ နှင့် စျေးဆိုင် မှာ စည်ကား စေရန် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ ယတြာ
Next post အိမ် တချို့ရဲ့ အဝင်အဝ မှာ ကြည့်မှန် တွေထား ရ တဲ့ အကြောင်း ရင်းမှန်